ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကတောင် အလေးထားတယ်
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကတောင် အလေးထားတယ်
ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကတောင်
အလေးထား ပြီးဖော်ပြနေကြ တွေ့ ဆုံနေကြတာတွေဆုတွေပေးနေတာတွေက မြန် မာဆိုတဲ့အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကို ဂန္တ၀င်စာတင်လောက်တယ်.. ဘာမဟုတ်တဲ့ ဖေ့ဘုတ်က မလောက်လေးမလောက်စားတွေက ဒေါ်စုကိုမူတည်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာတွေရေးကြတာတွေ့ ရတော့ ကျနော်သူတို့ ကိုသနားမိတယ်။ အင်း..ကျနော်ဒီလိုရေးတော့ ဟိုတနေ့ က ဒေါ်စုပြောတဲ့မ်ိန့် ခွန်းကိုသွားသတိရတယ်....
"တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ မျှော်မှန်းချက်တွေကို အာမခံတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်လာမှသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံး အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်"လို့ ဗမာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါ ပြောသွားတယ် ။ အဲလိုလေးတွေဖော်ပြတော့ ကျနော့်ကို ၀ိုင်းကစ်လာကြတယ်.
ဥပမာ Unfriend လုပ်သွားတာတွေBkockသွားကြတာတွေရှိတယ် ..ဒါတွေက သူတို့ လုပ်တာ သူတို့ သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကလားဆန်ပါလားဆိုပြီး ကျနော်စိတ်ထဲက ပြောမိပါတယ်။ နောက်တစ်ခု အဆိုအမိန့်က
အလကားအားလို့ ယားလို့ ဖွနေတာမဟုတ်ပါဘူး..ဒါတွေဟာ ဒေါ်စုရဲ့ သမိုင်းတွေ ပါတန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့ သိအောင် ယူတတ်ကြပါစေ
..ဒါမျိုးသိအောင်လဲထွန်းဝေက တင်ပေးနေမှာပါ . ဒေါ်စုကိုတိုက်ခိုက်သူများ သတိသာထားပြီးနေကြပါ ..သတ္တိရှိရင် ကျနော့ဆီလာရေးကြပါ ။စစ်ဖိနပ်ကိုလျှာနဲ့ ဝအောင်လျက်ထားကြပါ။ အဲလိုလျက်တဲ့ကောင်တွေ မိမိဓါတ်ပုံတောင်မဖော်ပြရဲကြဘူး..စကတ်ဘဲဝတ်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာလျှောက်ရေးကြ။ဦးနှောက် လေးနှပြားတပဲနဲ့ ၊ဖေ့ဘုတ်မှာကီးဘုတ်လေးရှိရုံနဲ့ ရိုက်တဲ့စာတွေ..လျှာအရိုးမရှိးမရှိတဲ့ ဓါတ်ပျက်တဲ့ ဦးနှောက်တွေကြောင့် အွန်လိုင်းမှာအာလူးဝအောင်ပေးလို့ လို့ရပါတယ် ။ ကိုယ် ဘာကောင်လဲ စစ်ဖိနပ်ကိုလျှာနဲ့ ယက်မယ့်သူလား ကိုယ် ဝေဖန်မည့်သူက ဘာကောင်လဲ ဆိုတာကိုတော့ သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်..အားလူးပေးပြီးရေးတဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့
ထင်တာတွေမေးတာတွေ သွေးပျက်နေပြီ...အာနဲ့ မမေးရင် အာနဲ့ ပြန်ဖြေပေးမယ်မင်းတို့ မှတ်ထား ဒေါ်စုကိုထိရင် ငါ့ကိုတံခါးခေါက်လိုက်အချိန်မရွေးလာထားဘဲ
ပါးကိုမီးနဲ့ တို့ ရင်ငြိမ်းခံနေတဲ့အထဲမှာ ကျနော်မပါဘူးဆိုတာ ပြောပြတာပါ..။
ကဏ္ဍ စာရေးဟန် စိန်ခေါ်ချက်
Lin Luck Lu 30 January 2013 at 02:52
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ..... အကိုရေးတာသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာ .... ဒေါ်စု ခုလလက်ရှိ နိုင်ငံ အတွက် ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ ... ဘာတွေ လုပ်ပြီးပြီလဲ ... ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ရထားသူတယောက်အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ ...... သူငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆု ဘာကြောင့် ရသလဲ .... အဲ့ ဒါလေးတွေ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .... ကျွန်တော် ကတော့ ဒေါ်စု ဘက်တော် သားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ... အသက်ကိုတော့ လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ .... ကျွန်တော့် Fb က www.facebook.com/9988776655war ..... Lin Luck Lu ပါ ..... ဒီမှာ ပြောရင် ကျွန်တော် က မြန်မာနိုင်ငံ ကဆိုတော့ လိုင်းမကောင်းရင် မသိနိုင်ပါဘူး ..... အကို အဖြေ လေးတွေ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .....
Demon330 January 2013 at 03:18
ကျွန်တော်ကတော့ စစ်ရန်နိုင်လို့ ခေါ် တဲ့ Phay Sit Gyi ပါ ။
ဥပမာ Unfriend လုပ်သွားတာတွေ Blogသွားကြတာတွေရှိတယ် ။ Blogger ၁ ယောက်အနေနဲ့ စာလုံးပေါင်းကို အထူး အလေးထားစေချင်တယ် ခင်ဗျာ ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ Mesg ကို စာဖတ်သူတို့ ထင်သာမြင်သာ ဖြစ်အောင် ရေးပြ ပြောပြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် သိတာတော့ Blog လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိဘူး ဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ဒါနဲ့ ကိုလင်းလက်လူ မေးတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေဆိုပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်ပြုဖို့ မလိုဘူး ။ ကိုယ့်လိပ်ပြာ အသိအမှတ်ပြုရင် လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့ ။ နေရာမှာလည်း စာအရေးအသားလေးကို ပြင်စေချင်ပါတယ် ။
ဒီစကားအတွက်လည်း မရှင်းပါဘူး ခင်ဗျာ ။ ဘယ်သူမှ အသိ အမှတ်ပြုဖို့ မလိုဘူးဆိုတော့ ။ ငါဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်ကြီးလွန်ကဲပါတယ် ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရောက်နေပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အရူးတွေလို့ တောင်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ် ။ အခြားလူကိုပါ သိအောင်လုပ်ပေးပြီး ထိုသူတို့ ပါ ကိုယ်နဲ့ ပါဝင်လက်တွဲလာနိုင်မှ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ နောက်လိုက်ကောင်းပီသခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါ ။ အများသိဖို့ မလိုဘူးဆိုတာကတော့ ။ ဒါဟာ အစုအဖွဲ့ နဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိဘူးလို့ ပဲ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ် ။ ကျွန်တော်မှားခဲ့ရင်လည်း ပြန်ပြောပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများ နဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပစေ ။
kotun 30 January 2013 at 09:38
ဒီစာကို ကျနော်ရေးရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေရာတကာတွင် ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ စစ်မိစ္ဆာများ၏ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်များကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားပါတယ်။ သိလည်းသိကြမည်ထင်ပါတယ်..face book ဆိုတာ မိမိတို့ ရဲ့ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုပါ ကိုယ်တိုင်လဲဘာအ၇ည်အချင်းမှမ၇ှိ ၊ဘာမှလဲမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘဲ ဒေါ်စုကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာအလွန်သေးသိမ်တဲ့စိတ်ဓါတ်၇ှိတဲ့ သူဆိုတာထင်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လဲအပုတ်ချဆေးရောင်း တဲ့ အကေါင်တွေစာဖတ်၇တာခဏခဏဒေါသထွက်မိတယ်။သူတို့ ဘ၀က အလွန်သနားစရာကောင်းပါတယ်....ထမင်းတ၀မ်းစားရဘို့ နေစရာလေးရဘို့ အတွက် လူကျင့်ဝတ် လူအသိဥာဏ်ကို ကျောခိုင်းပြီး ရေးသားနေကြသူများဖြစ်ပါသည်..။Unfriend လုပ်သွားတာတွေ Blogသွားကြတာက ဖေ့ဘုတ်မှာရေးနေကြတာတွေ သူငယ်ချင်း အဖြစ်ကနေ သူငယ်ချင်းမလုပ်ချင်တာတို့Bkock သွားကျတာတွေက ဖေ့ဘုတ်မှာ မမြင်ရအောင် လုပ်သွားတာလို့ ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီစာကဒေါ်စုမိန့် ခွန်းပါ(ဘယ်သူကမှအသိအမှတ်ပြုဖို့ မလိုပါဘူး
ဘယ်သူကမှ အသိအမှတ်ပြုဖို့ မလိုဘူး ။ ကိုယ့်လိပ်ပြာ အသိအမှတ်ပြုရင် လုံလောက်တယ်..။) အမေစုပြောစကားကို မိန့် ခွန်းတွေကို ကျနော်ပြင်လို့ မရပါဘူး မူရင်းအတိုင်းဘဲဖော်ပြတာပါ..စာလုံးပေါင်းမှားတာတော့ပြောပြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Phay Sit Gyiကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်